အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်း - WorldRef
စီးပွားရေးအသုံးအဆောင်နှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး နိုင်ငံတကာအမှာစာ & စီမံကိန်းများအတွက်
သင်၏လူများအားခန့်မှန်းရန်စျေးကြီးလွန်းသည့်တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်ကျွမ်းကျင်သူများကိုငှားရမ်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ နှင့်ရေတွက်နေသည့်ကျယ်ပြန့်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မြန်ဆန်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်း 25 ကျော်အတွေ့အကြုံရှိအတည်ပြုပြီးမြန်ဆန်အေဂျင်စီများ၏ကွန်ယက်ကိုအသုံးချ။
သငျသညျပင်လယ်ခုနစ်ခုကွာလျှင်ပင်, တရားစွဲဆိုမှုအပေါ်အမြဲတမ်းမျက်စိ! ဒေသခံညှိနှိုင်းမှုလည်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအများကြီးပိုမြန်စေသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေးသွင်းသူများ (သို့) ကန်ထရိုက်တာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းနှင့်အတူတစ်ခါမျှမလွယ်ကူခဲ့ပါ။
၀ ယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်များမှတင်ပြသည်မှာကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်အန္တရာယ်လျှော့ချခြင်း (၅၅%) သည်နောက် ၁၂ လအတွက်ထိပ်တန်း“ အားကောင်းသော ဦး စားပေး” စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ (* Deloitte Global CPO Survey, 55)
မင်းကိုကူညီခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပါ ထောက်ပံ့ရေး Value Chain
စားပွဲဝိုင်း Expediting ပံ့ပိုးမှု
On-Site စစ်ဆေးခြင်း & QC
လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် Desk Expediting Support
Desk Expedition ကိုအရေးမကြီးသော၊ နည်းဗျူဟာအရမဟုတ်သောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါ (သို့) သင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံသူသတ်မှတ်ထားသောအချိန်နှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ပါ။
အန္တရာယ်များ & နှောင့်နှေးအခမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီမံကိန်း Execution
သင်ရွေးချယ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် WorldRef မှကမ်းလှမ်းချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။
Amar Singh က Rawat,
ကုမ္ပဏီများသည်စီမံချက်အစီရင်ခံမှုအတွက်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးစီမံကိန်း ၂၀% မှအဖွဲ့အစည်းများသည် PMIS ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းမန်နေဂျာအများစုသည်အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ (* လုပ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ဖျက်ပါ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် Global Construction Survey, KPMG International)
မည်သည့်အမြန် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကို WorldRef ပေးသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာပို့ဆောင်ရန်တွန်းအားဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေး၏မည်သည့်ကဏ္whetherတွင်မဆိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ အရင်းအမြစ်တွေကိုရေရှည်အခြေခံပြီးငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု သင့်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ.
ဤဝန်ဆောင်မှုသည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးပြု သင့်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ.